2. မူပိုင်ခွင့်ပြုထားသော multi-cavity တည်ဆောက်ပုံ၊ ပါဝါအပေါက်၊ အလင်းရင်းမြစ် ကပေါက်နှင့် wiring cavity အလောင်းများသည် သီးခြားဖြစ်သည်။
3. မြင့်မားသော borosilicate tempered glass ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အဖုံး၊ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အဖုံးကို atomization ဆန့်ကျင်သော ဒီဇိုင်း၊ ၎င်းသည် မြင့်မားသော စွမ်းအင်သက်ရောက်မှု၊ အပူပေါင်းစပ်မှုနှင့် အလင်းပို့လွှတ်မှု 90% အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
5. အဆင့်မြင့် drive ပါဝါနည်းပညာ၊ ကျယ်ပြန့်သောဗို့အားထည့်သွင်းမှု၊ အဆက်မပြတ်လက်ရှိ၊ အဖွင့်ပတ်လမ်းကာကွယ်ရေး၊ ဝါယာရှော့ကာကွယ်ရေး၊ ရေလှိုင်းကာကွယ်ရေးနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ။
6. နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ် LED မော်ဂျူးများစွာ၊ အဆင့်မြင့်အလင်းဖြန့်ဖြူးနည်းပညာ၊ အလင်းဝတ်စုံနှင့် ပျော့ပျောင်းသော၊ အလင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု ≥120lm/w၊ မြင့်မားသောအရောင်ဖော်ခြင်း၊ တာရှည်ခံခြင်း၊ အစိမ်းရောင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ခြင်း။
7. LED အလင်းရင်းမြစ် သက်တမ်းကို သေချာစေရန် လေပြွန်ဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသော အပူ- dissipating လေပြွန်။
1. မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များ၏ အဓိပ္ပာယ်တွင် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရွေးချယ်ပါ၊ မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ပြီးနောက် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော အမှတ်အသားကို ပေါင်းထည့်ပါ။သီးခြားလက္ခဏာမှာ- "ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် - သတ်မှတ်ချက်ကုဒ် + ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံခြင်းအမှတ်အသား + မှာယူမှုအရေအတွက်"။ဥပမာအားဖြင့်၊ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ပလပ်ဖောင်းမီးခွက် 30W လိုအပ်ပြီး အရေအတွက် 20 အစုံဖြစ်ပါက၊ အမိန့်မှာ- "မော်ဒယ်- BAD63-သတ်မှတ်ချက်- A30P+ExdmbIIC T6 Gb+20" ဖြစ်သည်။
မော်ဒယ်၏ သက်ရောက်မှု အင်္ဂါရပ်များ 1. အလူမီနီယံ အလွိုင်းပုံသွန်းခွံ၊ မျက်နှာပြင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန်းဆေး၊ လှပသော အသွင်အပြင် 2. တစ်ခုတည်းသော LED ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော မော်ဂျူလာ ဒီဇိုင်းထူးခြားသော၊ အထူးမီးခွက်ကွင်း သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသော လက်စွပ်ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်၍ သွန်းလုပ်နိုင်သည် မီးချောင်းများ၊ မီးချောင်းများ သို့မဟုတ် မီးအိမ်များသည် အမျိုးမျိုးသောနေရာများ၏ အလင်းရောင်လိုအပ်ချက်များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက်၊ ပိုမိုအဆင်ပြေသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်မှုတို့ဖြစ်သည်။3. မြို့ပြ ဒီဇိုင်းနှင့်အညီ လမ်းမီးများ...
Model Implication Features 1. အကာအရံအား မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှု၊ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော ခိုင်ခံ့မြင့်မားသော အလူမီနီယံသတ္တုစပ်ဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်း ပုံသွင်းထားသည်။၎င်း၏ အပြင်ဘက်သည် အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ပေါက်ကွဲပြီးနောက် ဖိအားမြင့်သော ပလပ်စတစ်ဖြင့် ပက်ဖြန်းထားသည်။၎င်းတွင် ပလတ်စတစ်အမှုန့်များ၏ ခိုင်ခံ့သော ကပ်ငြိမှုနှင့် သံချေးတက်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ပါသည်။အပြင်ဘက်တွယ်ကပ်များကို Stainless Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။2. ၎င်းကို 360° အလျားလိုက် လှည့်နိုင်ပြီး +90°～－60° အကွာအဝေးတွင် ချိန်ညှိနိုင်သည်။3. Focusing structure သည် l...